Ngwu nnu - The katidral nnu ala na Poland | Njem zuru oke
Susana godoy | | ndị ọzọ
na Ngwu nnu na-adị na Poland na karia, na obodo Wieliczka nke di na mpaghara Krakow. Site na narị afọ nke iri na ise enwere ike ileta ha na nke mbụ ya site na ebe a, ọ ghọọla otu ebe kachasị mkpa na Poland. A na-edeba aha ihe karịrị ọkara nde ndị ọbịa kwa afọ.
A na-amarakwa ebe a na-egwupụta nnu "Ndị n'okpuruala katidral nke nnu". Ha nwere omimi nke ihe kariri mita 327 na ihe dika 300 kilomita n'ogologo. Taa ha bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta dị mma, na-enye ụzọ dị iche iche na ọtụtụ ihe nzuzo, nke anyị ga-achọpụta ugbu a banyere saịtị a.
1 Otu esi enweta ebe nnu
2 Njem dị iche iche nke mines nnu
2.1 Ntugharị ndị njem
2.2 Ingzọ njegharị Mining
2.3 Ilzọ njem njem njem nsọ
2.4 Towerlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ
2.5 Nzuzo nke nnu nnu
3 Ahịa na oge
5 Data itinye n'ime akaụntụ
Site na etiti Krakow, anyị ga - ahụ ebe a na - egwu nnu n’ime ihe dị ka kilomita iri. Iji mee nke a, ịnwere ike ịnara ọtụtụ ụzọ dị ka ụgbọ oloko, bọs ma ọ bụ họrọ njegharị na ihe dị ka euro 35, ọ ga-agụnye nduzi ahụ, ọnụ ụzọ nke ebe a na-egwupụta akụ na njem.
Na ụgbọ oloko: Ọ bụrụ na ị họrọla ime njem ahụ n'onwe gị, ọ dịghị ihe dịka COMMUTER ụgbọ oloko. N'okwu a, ị ga-esi na ọdụ Krakow gaa ọdụ Wieliczka Rynek Kopalnia.
Busgbọ ala: Ọ bụ ihe ọzọ na dị ọnụ ala karịa njem, mana ee, ọ ga-enwekwu nkwụsị. Maka nke a, njem gị nwere ike gbue oge karịa ka ọ dị mkpa. Ga-ewe akara 304 site na ụlọ ahịa Galería Krakowska na nbata ahụ ga-abụ Wieliczka Kosciól.
Njem dị iche iche nke mines nnu
Ozugbo ị ruru ebe ahụ, ịmara na e nwere ụzọ dị iche iche. Nke mere na n'ụzọ dị otú a, ị gaghị efu otu akụkụ nke ihe ndị ahụ. Ha ga-agbanwekwa maka mkpa gị.
Ntugharị ndị njem
Otu n'ime njem ndị a rịọrọ bụ nke a. Ọ bụ maka ileta ụfọdụ Ime ụlọ iri abụọ nke gwupụtara na nnu. N'otu oge ị pụrụ ịhụ otú ọdọ mmiri bụkwa akụkụ nke ha. N’ikpeazụ, ị ga-anụ ụtọ ihe nnu nnu. Ọ bụ ihe ndị akụkọ ihe mere eme bụ ndị a na-agbụ ọnụ mmiri na nnu. Ihe dị ka kilomita atọ bụ ihe ị ga - anụrịrị na maka nke a, ị ga - agbadata usoro usoro, nke kwesịrị ya. Njem a malitere na Danilowicza nke ọma, ị ga-agakwa otu n'ime ụlọ ndị a ma ama nke Santa Kinga. Ngwaọrụ na igwe eji rụọ ọrụ ebe a agaghị efu.
Ingzọ njegharị Mining
Maka ndị chọrọ ị nweta ihe niile metụtara m na onye mbụ, nke a ga-abụ njem ha kacha mma. Ha ga-eyi uwe ndị dị mkpa iji malite njem ahụ. Mbụ ị ga-agbadakwuru otu n'ime ochie olulu mmiri nke bu aha ya, bu Regis ọma. N'okwu a, ọ ga - abụ onye ndu njem ga - ekenye ndị sonyere ya ọrụ. O nwere ike ịbụ ịgagharị ime ụlọ ma ọ bụ ibuga nnu, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ihe njem dị egwu kachasị atọ ụtọ. O nwekwara oge dịka nke gara aga, nke awa atọ.
Ilzọ njem njem njem nsọ
N'okwu a, anyị rutere ụzọ ndị njem ala nsọ. N'ime ya ị ga-enwe ike ịchọpụta ma ụlọ ụka dị iche iche na ihe osise a pịrị apị na nnu. Ọ ga-agwụ na ụlọ ụka Santa Kinga iji nwee ike ịnụ ụtọ ụlọ niile dị na ebe a. Ọ ga-eju gị anya !. Nwekwara ike ịnụ ụtọ ụlọ ụka San Juan, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, ejiri osisi rụọ ya. Ọ dị mkpa iji gosipụta ihe ọhụrụ uka nke raara nye John Paul II. N'okwu a, ụzọ ga-abụ awa abụọ na ọkara.
Towerlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ
Ebe ọzọ a na-eme nzukọ bụ ụlọ akwụkwọ ngụsị akwụkwọ. N'okwu a, anyị anaghị ekwu maka okpuru ala, mana anyị ga-abịa n'elu. Ọ bụ mpaghara ịga ije n'efu ma ị nwere ike ịchọpụta nnukwu uru ahụike ya. Na mpaghara a, ị nwere ike ikuba oku brine ịgba, nke zuru oke maka ịgwọ ọrịa nke akụkụ iku ume. N'ụzọ nke a, ị ga-ehichapụ usoro ikuku na ụzọ nkịtị. N'ezie, ọ bụghị ihe amamihe dị na itinye ihe karịrị ọkara otu awa n'ebe a. Lọ elu ahụ karịrị mita 26 dị elu, yabụ na mgbakwunye na ọgwụgwọ maka ahụ, ọ nwere ike ịbụ maka anya, n'ihi echiche panoramic na ọ na-ahapụ anyị.
Nzuzo nke nnu nnu
N'ihi na dimkpa na kasị adventurous, e nwere ụzọ nzuzo nke nnu nnu. Ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị dị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ọ na-esiri ike ịnweta ma ị ga-enwe nnukwu ike anụ ahụ. Ga-enwe ike ịnyagharịa ụzọ ndị kacha dịrị warara, mana mgbe niile n’okpuru nlekọta nke ọkachamara. Ga-amatakwa ezigbo omimi nke ụwa.
Ahịa na oge
Maka nleta nke ọ bụla, ị ga-akwụ ụgwọ 84 PLN. Ọnụ mbelata na kaadị ụmụ akwụkwọ, ụmụaka sitere na afọ anọ ma ọ bụ karịa, ga-abụ 64 PLN. I nwekwara ike ịnụ ụtọ ọnụego ezinụlọ nke gụnyere mmadụ 4 maka 232 PLN. Ekwesịrị ikwu na, banyere 84 PLN bụ ihe dị ka euro 20. Ọnụego na-abawanye ntakịrị ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọnwa Eprel-Mee na July ma ọ bụ August.
Ma hazie oge nnu Ọ ga-emeghe n’April 1 ruo October 31 site na 7:30 nke ụtụtụ ruo 19:30 mgbede. Site na November 2 ruo March 21, ị nwere ike ịnụ ụtọ gburugburu ebe a site na 8: 00 ụtụtụ ruo 17: 00 pm
Have nwere akụkụ abụọ dị mkpa iji chọta ebe obibi: N'elu ma ọ bụ n'ime omimi nke m. Ọ dabere na ihe ga-akacha baara gị na ezinụlọ gị uru.
Ebe obibi n’elu: N'ebe a ị nwere ike ịchọta ụlọ nkwari akụ okomoko a na-akpọ Grand Sal, nke nwere kpakpando anọ. N'aka nke ọzọ, enwere ego ezumike nka a na-akpọ, «Mlyn Solny». Ọ bụ ebe a maara nke ọma kamakwa mara mma.
Ulo n'ime ogbu mmiri: N'otu aka, e nwere igwefoto slowacki O nwere akwa 48 na ebe egwuregwu diri umuaka. Ma na nke ọzọ, ị ga-ahụ ebe a na-akpọ, ụlọ kwụsiri ike. Dị ka aha ya na-egosi, ha bụ ụlọ ebe a gbanwere ugbu a gaa ebe izu ike, ebe enwere ebe 28.
Data itinye n'ime akaụntụ
Ọ ka mma mgbe niile ba uwe di ọku banye dika ebe a. N'agbanyeghị eziokwu na ị gara leta ya n'oge ọkọchị, n'ime nnu nnu, ọnọdụ okpomọkụ dị gburugburu 14º.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụ anwụ oge a foto mara mma, ị ga-akwụ 10 PLN ihe banyere ego nke tiketi gi. You nwere ike ịkwụ ụgwọ ya abụọ na igbe ọrụ na ozugbo njem gị amalitela.
Cannot nweghị ike ịbanye na anụmanụ n'ihi na enweghị ebe ha nwere ike ịnọ.
Nnu nnu dị mma maka nleta ezinụlọ. Naanị ị ga-ahọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị maka ya. Undermụaka nọ n'okpuru afọ 4 bụ n'efu. Na mgbakwunye, n'okporo ụzọ ahụ, ị ​​ga-ahụ tebụl na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ oche maka nkasi obi ka ukwuu.
N'ime njem njegharị ndị njem, enwekwara mpaghara ndị mmadụ nwere ike ịgagharị agagharị. Maka nke a, ha nwere forklifts.
I nwekwara ime ụlọ ịwụ ahụ n'ime ebe a na-egwupụta ihe. Ga-ahụ otu n’ime ha ihe kariri ọkara elekere agafeela nke na-esote ya, ihe dịka nkeji iri itoolu site na mbido ụzọ ahụ.
Na mmechi, aghaghi icheta na ebe a nwere ihe kariri ime ulo 2.400 nke jikoro site na veranda di iche iche, ogologo ya di kilomita 245. Na mgbakwunye, ha na-ebu dị iche iche ọkwa sitere na site 64 mita miri emi na 327 mita. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile ịgbaso na ịkwanyere iwu yana ntuziaka anya ka ọ ghara inwe nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Wieliczka Nnu M